Jabuutyo dhalaalaya oo tayo sare leh oo dhalaalaya MIYUKI delica beads 11/0 ee samaynta dharka qurxinta dharka
Beads Miyuki Delica Beads waa muraayad dhululubo oo aad u labisan oo leh afar cabbir iyo tiro badan oo midabo iyo dhammeystir ah. Guluusyada Delica waxay leeyihiin tuubbo ama qaab dhululub ah, oo fidsan oo leh dalool weyn oo u dhigma cabirkooda. Badanaa waxaa loo isticmaalaa farsamooyinka dhogorta ka baxsan ee dharka laga xirto iyo sidoo kale shaqada miisaska jilicsan. Intaa waxaa sii dheer, koofiyadaha MIYUKI waxaa loo tixgeliyaa inay yihiin "halbeega adduunka" tayadooda sare, dhalashadooda, iyo qaabka lebiska. Waxaa si aad ah u doondoonaya naqshadeeyayaasha moodada, farshaxanada iyo taageerayaasha baashaalka si isku mid ah.
Qaar ka mid ah gitaallada ayaa la qalajiyay, la daadiyey ama la fidiyay. Midabbada dusha sare ayaa laga yaabaa inay ka baxaan, xoqaan, ama haddii lagu qooyay dareeraha adag.
Line Saqafka qallinka ama guluubka la gashado ayaa la naaqusayaa iyada oo lagu dabaqi karo dhar ka mid ah aashitada, way burburi karaan ama u wareegi karaan mugdiga isbeddelka kiimikada awgeed. Si looga fogaado kiisaska noocaas ah, ka takhalus dharkaaga iyo duntaaga ka hor intaadan daabicin.
Magaca Astaanta JC Crystal
Nambarka Model JC20190116175A
Midabka gadhka Xulashada midabka
Magaca badeecada Miyuki Delica Beads
Isticmaalka Qalabka Gargaarka, Jumladihii Jewelry & Necklaces
Nooca Kabaha dabacsan
MOQ 120 garaam (10 garaam / tubo)
Cabbirka xirmo oo keliya: 5X5X5 cm
Culeyska guud ee jirka ah: 0.012 kg
Nooca xirmada: 10 garaam / tuubbo, 25 garaam / kiis, 100 garaam / polybag, 250 garaam / polybag, 500 garaam / polybag
Gram / kumbuyuutar
Hore: Dhagaxyo k9 teardrop rhinestones dhagaxa dhagxaanta ah, tayo sare leh dhammaan noocyada kala duwan ee dib u soo celinta dhalada dahabka ah ee alaabta iibka kulul kulul 3 iibsadayaasha
Xiga: Dukaan bilaash ah 4mm 6mm 8mm dhul muraayad luul ah silsilad silsilad jilicsan luul dahab luul ah
Goads Seed Glass
Beads abuur 11/0
Beads abuur Beeraha
Cilmiga tayada sare leh
Soojiidasho miyuki oo tayo leh oo tayo leh biraha ...
2mm dhagaxa dhagaxa dabiiciga ah ee buluuga ah ee dabiiciga ah ...
Dukaan bilaash ah 4mm 6mm 8mm hareeraha luul luul ah ...
Dhagaxyo k9 teardrop rhinestones oo dhagxaan qaan ah ...
Warshadaha Jingcan jumlo oo dhami oo tolo dhagxaan, ku tolo ...